Start Date : 25-January-2020
Class Code : ICM-LSCM-18-02
Logistics & Supply Chain ဆိုတာဘာလဲ?
Logistics Management ဆိုတာ Organization တစ်ခုလုံးနဲ့ မားကတ်တင်း channel တွေရဲ့မဟာဗျုဟာကျကျ ကုန်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူခြင်း ကစပြီး ကုန်ပစ္စည်းများ လည်ပတ်စီးဆင်းမှု နဲ့ ထုတ်ပိုး သိမ်းဆည်းမှုဆိုင်ရာအဆင့်ဆင့် လုပ်ငန်းများကို စီမံကွပ်ကဲခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ Supply Chain Management ကတော့ ကုန်ကြမ်း တွေကို ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ Supplier တွေကစပြီး သုံးစွဲသူတွေဆီ ရောက်တဲ့အထိ ပါဝင်တဲ့ ကြားခံကွန်ယက်များ ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းဖြစ်ပါ တယ်။
Logistics & Supply Chain Management ဘာသာရပ်မှာ ဘာတွေသင်မှာလဲ?
Logistics & Supply Chain Management မှာအခန်းကဏ္ဍ ပေါင်းများစွာပါဝင်ပြီး၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်း၊ ကုန်ကြမ်းများဆိုင်ရာစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးရတဲ့အပိုင်း၊ ကုန်ပစ္စည်း စာရင်းပြုစုခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်ခြင်းနဲ့ လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်ဆင့် မှာ ကုန်ကျစရိတ်များကိုထိန်းချုပ်ခြင်း စတဲ့ အခန်းကဏ္ဍတွေကို လေ့လာရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အပြိုင်အဆိုင်တွေ များတဲ့ ယနေ့ခေတ် ထဲမှာ လူတိုင်းဟာ ကောင်းမွန် တဲ့အရည်အသွေးကိုသာလိုချင်ကြတဲ့ အတွက် လုပ်ငန်းတွေ ပြိုင်ဆိုင် ကြတဲ့အခါမှာ သူတို့ရဲ့ ထုတ်ကုန် ဒါမှမဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုရဲ့ အရည် အသွေး မြင့်လေလေ ကုန်ကျ စရိတ် များလေလေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အရည်အသွေးကို မထိဘဲ မလိုအပ်တဲ့ ကုန်ကျစရိတ်များကိုလည်း လျော့ချနိုင်ဖို့ဆိုရင် Logistic Management ကိုကောင်းကောင်း သိထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Logistics & Supply Chain Management ကို ဘယ်သူတွေတက်သင့်လဲ? ။
သင်တန်းကာလမှာ ၅ လခွဲကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ICM စာမေးပွဲ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုပြီး အောင်မြင်ပါက Institute of Commercial Management (UK) မှ ပေးအပ်သော Single Subject Diploma များရရှိပါမည်။
ICM Single Subject Diploma in Logistics & Supply Chain Management ဘာသာရပ်တွင် သင်ကြားမည့် ခေါင်းစဉ်များမှာ
- Competing Through Logistics
- Material & Information Flow
- Setting Customer Service Priorities
- Value & Logistics Costs
- Balanced Measurement Portfolio
- Supply Chain Operations Reference Model
- Managing Logistics Internationally
- Managing the Lead Time Frontier
- Time-based Mapping
- Managing Timeliness in the Logistics Pipeline
- Just-In-Time & Lean Thinking
- The Agile Supply Chain
- Collaborative Supply Chain Planning
- Forecasting & Replenishment
- Supply-based Rationalization
- Supplier Network Development
- Logistics Future Challenge
Institute of Commercial Management (UK) မှ စစ်ဆေးသော စာမေးပွဲကို အောင်မြင်ပါက ICM Single Subject Diploma in Logistics & Supply Management ရရှိမှာဖြစ်ပါသည်။